Known Islam Association Myanmar: အစ္စလာမ်သာသနာနှင့် ၇၈၆ ဂဏန်းအကြောင်း ၇၈၆ နဲ့ အစ္စလာမ် မည်သို့ပက်သက်သလဲ?
အစ္စလာမ်သာသနာနှင့် ၇၈၆ ဂဏန်းအကြောင်း ၇၈၆ နဲ့ အစ္စလာမ် မည်သို့ပက်သက်သလဲ?
၇၈၆ ဟူသောသင်္ကေတမှာ ယနေ့အများပြောနေသလို ခွန်၊ ရှစ်၊ ခြောက် ဟူသော သီးခြားဂဏန်းသုံးလုံးမဟုတ်ဘဲ ခုနှစ်ရာရှစ်ဆယ့်ခြောက်ဖြစ်ပါသည်။ ယင်း(၇၈၆)နှင့်စပ်လျဉ်း၍ အစ္စလာမ်သာသနာ၏ မှတ်ကျောက်ဖြစ်သော ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်နှင့်တမန်တော်မုဟမ္မဒ်၏ သြ၀ါဒမှတ်တမ်းများတွင် ဖော်ပြထားခြင်းမရှိသဖြင့် ၇၈၆သည် အစ္စလာမ်သာသနာ၏ အရင်းအမြစ်နှင့်
ဖြစ်စေ၊ လမ်းညွှန်ချက်နှင့်ဖြစ်စေ တိုက်ရိုက်ပတ်သက်ခြင်း လုံး၀မရှိပါ။ ထို့ကြောင့် အဖွဲ့၀င် ၅၇ နိုင်ငံပါ၀င်သော OIC ခေါ်မွတ်စလင်မ် နိုင်ငံများ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့၊ ရာဗိသွဟ် ခေါ် ကမ္ဘာ့မွတ်စလင်မ်အဖွဲ့ချုပ် အပါအ၀င် မွတ်စလင်မ်နိုင်ငံများတွင် ၇၈၆ သုံးစွဲခြင်း အလျှင်းမရှိကြပါ။ အာဆီယံအဖွဲ့၀င် နိုင်ငံများဖြစ်သော မလေးရှား၊ အင်ဒိုနီးရှားနှင့် ဘရုနိုင်းနိုင်ငံများတွင်လည်းအသုံးမပြုပါ။ ထို့အပြင် အစ္စလာမ်သာသနာတွင် ဗေဒင် လက္ခဏာပညာကိုဖြစ်စေ၊ ကိန်းဂဏန်းအတိတ်နိမိတ်များကလူ့ကံကြမ္မာကို လွှမ်းမိုးခြယ်လှယ်သည်ဆိုသည့်အယူကိုဖြစ်စေ ပြင်းထန်စွာတားမြစ်ထားရာ ၇၈၆ နှင့် ၂၁ ဂဏန်းတို့သည်
အစ္စလာမ်သာသနာ၏ ယုံကြည်ချက်နှင့် ကျင့်စဉ် တို့ဖြင့် မည်သို့မျှပတ်သက်ခြင်းမရှိပါ။
၇၈၆ ဟူသောသင်္ကေတသည် လူမှုစီးပွားရေးတွင် မွတ်စလင်မ် အချင်း ချင်းကိုသာ အားပေးစေ၍ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူများ နှင့် မဆက်ဆံရဟူသော လမ်းညွှန်ချက်အလျှင်းမပါရှိပါ။ ယင်း ၇၈၆ သင်္ကေတရည်ညွှန်းသော ကုရ်အာန် ၏ အဖွင့်ဗျာဒိတ်တော်(၁း၁) တွင် အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာ၏ နာမတော် ၃ ပါးကို ပြဆိုထားရာ ဒုတိယနာမတော်မှာ အရ်-ရဟ်မာန် ဖြစ်ပြီး ယင်း၏အဓိပ္ပာယ်မှာ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ လိင်မခွဲခြားဘဲ ဖန်ဆင်းခံလောကအသီးသီး၏ အခြေခံလိုအပ်ချက်များကို ထောက်ပံ့သော မဟာကရုဏာရှင်ဟုဆို ထားရာ မွတ်စလင်မ်များ အနေဖြင့်လည်း ထိုနာမတော်အတိုင်း နှလုံးသွင်း၍ လူမျိုး၊ ဘာသာ၊ သာသနာ၊ လိင်
မခွဲခြားဘဲ တရားမျှတစွာ၊ ကြင်နာစွာဆက်ဆံရန် သွန်သင်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
ထို့အပြင် အနှိုင်းမဲ့ကိုးကွယ်ရာ မြတ်အလ္လာဟ်က---
၁။ ကမ္ဘာပေါ်ရှိ လူသားအားလုံးသည် လူမျိုး၊ ဒေသ၊ ယဉ်ကျေးမှု ကွဲပြားနေကြသော်လည်း မိသားစု တစ်စုတည်းသာ ဖြစ်ကြောင်း၊ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး၊ တစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုး အပြန်အလှန် အသိအမှတ်ပြုကြရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ လူတစ်ဦးနှင့်တစ်ဦးဖြစ်စေ၊ လူမျိုးတစ်မျိုးနှင့်တစ်မျိုးဖြစ်စေ မြင့်မြတ်ခြင်း ကို မှန်သောအယူ၊ မှန်သောအကျင့်ဖြင့်သာ တိုင်းတာကြောင်း (ကုရ်အာန် ၄၉း၁၃)
၂။ လူသားတို့အကြား မြတ်သောအကျင့်နှင့် ပြစ်မှုရှောင်ကာ ကောင်းမှုပြု ခြင်းကိစ္စများတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ကြရန် သို့သော်
ပြစ်မှုနှင့် ကျူးကျော် စော်ကားမှုတွင် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခြင်းမပြုကြရန် (ကုရ်အာန် ၅း၂)
၃။ အစ္စလာမ်သာသနာနှင့် မွတ်စလင်မ်တို့ကို စစ်မက် တိုက်ခိုက်နေသူ များ နှင့် အတွင်းရေးနီးကပ်သော ဆက်ဆံမှုမျိုးကိုသတိပေးထားပြီး ကျန် ကမ္ဘာ့လူသားတို့ အကျိုးဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ကြင်နာမျှတစွာ ဆက်ဆံခြင်းတို့မှ တားမြစ်ထားမှု မရှိ ကြောင်း (ကုရ်အာန် ၆၀း၈-၉)
ထို့အပြင် တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်ကလည်း သွန်သင်သည်မှာ ---
၄။ မွတ်စလင်မ်တစ်ဦး၏ အနိမ့်ဆုံးဂုဏ်ရည်မှာ လမ်းပေါ်မှ အများသူငါ သတ္တ၀ါတို့ကို အန္တရာယ်ဖြစ်စေသော ဆူးကဲ့သို့သောအရာကို ဖယ်ရှား ပေးခြင်း ပင်ဖြစ်သည်။ (ဗုခါရီကျမ်း)
၅။ မလှမ်းမကမ်းမှ ဂျူးဈာပန သယ်ဆောင်လာသည်ကို တွေ့သောအခါ တမန်တော်မြတ်မုဟမ္မဒ်က ထရပ်လိုက်သည်။ ထိုအခါအတူရှိနေသော နောက်လိုက်တစ်ဦးက မွတ်စလင်မ်တစ်ဦး၏ဈာပနမဟုတ်ဘဲ ဂျူးဈာပန ဖြစ်ကြောင်း လျှောက်ထားရာတမန်တော်မြတ်က “သူ့မှာလည်း ၀ိညာဉ် ရှိတယ်မဟုတ်လား”ဟုဆုံးမကာ မွတ်စလင်မ်တို့အနေဖြင့် လူရှင်ကို သာမက လူမျိုး ဘာသာမခွဲခြားဘဲ လူသေကိုပင် အလေးအနက်ထားရန် သွန်သင်တော်မူထား ပါသည်။ (ဗုခါရီကျမ်း)
ဗုဒ္ဓဘာသာ၀င် ရဟန်းတော်များ အတွက် အစာအာဟာရမှီ၀ဲရာတွင် ကျင့်ရန် ကျဉ်ရန် ၀ိနည်းရှိသလို မွတ်စလင်မ်တို့ အတွက်လည်း အစားစားသုံး ရာတွင် ဟလာလ်ခေါ်ခွင့်ပြုချက်၊ ဟရာမ်ခေါ်တားမြစ်ချက်၊ မတ်ကရူဟ်ခေါ် မနှစ်သက်ဖွယ်စသည့် စည်းကမ်းများစွာရှိနေပါသည်။ ယခုအခါ ကမ္ဘာနှင့် အ၀ှမ်း အစားအစာထုတ်လုပ်သူများအနေဖြင့် အစားအစာဘေးဥပဒ်ကင်းရေး
ဆိုင်ရာ (Food Safty) ထောက်ခံစာများကို သက်ဆိုင်ရာအစိုးရများထံမှ ရယူ ကြပါသည်။ ကမ္ဘာ့လူဦးရေ၏ ၄ ပုံ ၁ ပုံမျှသော မွတ်စလင်မ်ဈေးကွက် အတွက်လည်း (Halal Certification) ဟလာလ်ခေါ် စားသုံးခွင့်ရှိကြောင်း ထောက်ခံစာကို သက်ဆိုင်ရာ မွတ်စလင်မ် အဖွဲ့အစည်းများမှ ရယူကြပြီး မိမိတို့၏ကုန်တံဆိပ်များတွင် ဟလာလ်တံဆိပ် ခပ်နှိပ်ဖော်ပြထားကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၌ ယခင်က ၇၈၆ ဟု ရေးသားဖော်ပြထားရာမှ ယခုအခါ ဟလာလ် မှတ်ပုံတင် အမှတ်တံဆိပ် ဖော်ပြထားသည်ကို တွေ့ရပါသည်။ (၇၈၆ ကို မြန်မာပြည်တွင်း နေထိုင်သူတစ်ချို့က ဟလာဟ်တံဆိပ် အစား လွယ်ကူစာ အသုံးပြုခဲ့ကြပါတယ်။)
ယင်းသို့အစားအသောက်ဆိုင်ရာ မွတ်စလင်မ်တို့၏ စည်းကမ်းသတ်မှတ် ချက်များကို မွတ်စလင်မ်အချင်းချင်းသာအသေးစိတ် သိရှိလိုက်နာနိုင်သဖြင့် မွတ်စလင်မ်တို့အနေဖြင့် နေအိမ်ပြင်ပ၌ စားသောက်ရာတွင် မွတ်စလင်မ်ဆိုင် ကိုဦးစားပေး၍ ရှာဖွေစားသောက်ရခြင်းသာဖြစ်ပါသည်။ ယင်းအစားအသောက် အတွက် ဆန်၊ ဆီ၊ စား၊ ကြက်သွန်စသည့်ကုန်ကြမ်းများ၊ အခြားဟင်းသီးဟင်းရွက်သီးနှံများ၊ လျှပ်စစ်၊ ကုန်မာအစရှိသည်တို့ကိုမူ မိမိတို့အဆင်ပြေသလို မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူဆိုင်များမှလည်းအားပေး၀ယ်ယူလေ့ရှိကြပါသည်။ မွတ်စလင်မ်မဟုတ်သူများဖွင့်ထားသော လက်ဖက်ရည်ဆိုင်၌ မွတ်စလင်မ်များစွာ သောက်သုံး
အစ္စလာမ်သာသနာက အလှူဒါနပေးကမ်းရာတွင်လည်း လူမျိုး၊ ဘာသာ မရွေး လိုအပ်ချက်ရှိသူများကိုပေးကမ်းစေရန်ကုရ်အာန်ကျမ်းစာ၌ လမ်းညွှန် ချက်မြောက်မြားစွာပါရှိနေပါသည်။ ကိုလိုနီခေတ်က ဗမာမွတ်စလင်မ် ဆိုဆိုင်ယီတီ ဥက္ကဋ္ဌကြီး K.I.H ဦးဘအိုမှာ လူမျိုး/ဘာသာမရွေး ထောက်ပံ့ခဲ့ သည်။ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်က ဟာဂျီမ ပျဉ်းမနားဒေါ်ပုမှာ ထိုစဉ်က ကျပ်သိန်းသုံးဆယ်ကျော်တန် ကျောက်ကပ်ဆေးရုံကြီးကို ရန်ကုန်မြို့ ၌ အံ့ဖွယ်လှူဒါန်းခဲ့သည်။ ရန်ကုန်မြို့၊
မဟာဗန္ဓုလပန်းခြံလမ်းရှိ မွတ်စလင်မ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးရုံကြီးမှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ လူမျိုး/ဘာသာမရွေး အခမဲ့ကုသ ပေးလျက်ရှိ၏။
ယခုအခါ မန္တလေးမြို့၊ ၇၄ လမ်း၌လည်း မြင့်မြတ်ဖြူစင်အခမဲ့ ဆေးခန်းမှလည်း ကူညီပေးလျက်ရှိပါသည်။ မြန်မာပြည်၌ နာရေးကူညီမှုအသင်း များမပေါ်ပေါက်မီ နှစ်ပေါင်းများစွာအလျင်ကတည်းက မန္တလေးမြို့ မွတ်စလင်မ် များ၏ နိဗ္ဗာန်ဆော်အသင်း ကြီးက လူမျိုးမရွေး၊ ဘာသာမရွေး နာရေးကိစ္စများကို ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ နာဂစ်မုန်တိုင်းဒုက္ခသည်များကို ရက်ပိုင်းအတွင်း
ရန်ကုန်မြို့မှ အစ္စလာမ်အဖွဲ့ချုပ်ကြီးမှ သက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များနှင့် ညှိနှိုင်း၍ ရောက်ရန်ခက်ခဲသော ကျေးလက်များတိုင် ကုမ္ပဏီသူဌေးများကိုယ်တိုင် ခက်ခက်ခဲခဲသွားရောက်၍ လူမျိုး/ဘာသာမရွေး ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ လနှင့်ချီ၍ ဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ကြသည်။ မန္တလေးမှ မွတ်စလင်မ်များကလည်း အခြားညီနောင်များနှင့်တွဲဘက်၍ စနစ်တကျ ကူညီဆောင်ရွက်ခဲ့ ကြသည်။ သို့သော် ညာဘက်ကပေးလျှင် ဘယ်လက်ကမသိစေနဲ့ဟူသော အစ္စလာမ့် သွန်သင်ချက်အရ မွတ်စလင်မ်တို့၏
တိုင်းပြည်နှင့် လူမျိုးအတွက် မွတ်စလင်မ် တို့ပြုခဲ့ကြ သော အလှူများကို အများပြည်သူတို့သိပ်မသိကြပါ။
စီးပွားရေးရောင်း၀ယ်ဖောက်ကားမှုကို လူမျိုးတူ သို့မဟုတ် ဘာသာတူ သို့မဟုတ် ဒေသကန့်သတ်ချက်အတွင်း ကန့်သတ်ဆောင်ရွက်ခြင်းအားဖြင့် ယင်းလူမျိုး/ဒေသအတွင်း တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှု နှေးကွေးသွားစေပါသည်။ ဥပမာ-မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီခေတ်က မြန်မာနိုင်ငံသည် စီးပွားရေးတံခါး ပိတ်၀ါဒကျင့်သုံးခဲ့ရာ နောက်ဆုံးတွင် LDC ခေါ် ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးမှုအနည်းဆုံး စာရင်း၀င် နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါသည်။ ယခုအခါ မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ဈေးကွက်စီးပွားရေးစနစ် ကျင့်သုံးနေပြီဖြစ်ရာလူမျိုး/ဘာသာမရွေး ပြည်ပမှ အရင်းအနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဖိတ်ခေါ်ခြင်း၊ မိမိတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်း လူမျိုး/ဘာသာမရွေး ပြည်ပဈေးကွက်ရှာခြင်းတို့ကို ဆောင်ရွက်နေရသောကာလ ဖြစ်ရာ လူမျိုး/ဘာသာတူအချင်းချင်းသာ အားပေးရမည်ဆိုပါက ကိုယ့်သေတွင်း ကိုယ်တူးသကဲ့သို့သာ ဖြစ်ပါလိမ့်မည်။